कहिले हट्ला कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डमा घण्टौं जाम ? – Everest Dainik – News from Nepal
कहिले हट्ला कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डमा घण्टौं जाम ?
काठमाडौं, असोज १९ । केही दिनयता काठमाडौंको प्रमुख नाका नागढुंगा आसपासमा हुने गरेको जाममा घण्टौँ बिताउनुपरेको चर्को गुनासो आइरहेका बेला अधिकारीहरूले त्यस्तो समस्या अब केही दिनपछि अन्त्य हुने बताएका छन् ।
उक्त सडकखण्डमा आफ्ना कारणले नभर्इ ठूला मालवाहक सवारी साधनका कारण जाम भएको सडक विभागका अधिकारीहरूको भनार्इ छ । करीब पाँच किलोमिटर लामो नागढुंगा–पिपलमोड सडकखण्डको मर्मत सुरु भएसँगै सवारीसाधन घण्टौँ जाममा पर्ने गरेका छन् ।
यसै साता चितवनबाट काठमाडौं आउन लागेको एम्बुलेन्स त्यही जाममा पर्दा बाटोमै बिरामीको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यो सडकको अवस्थालाई लिएर चिन्ताहरू व्यक्त भएका हुन् । तर, आफ्नो कामले भन्दा पनि अन्य कारणले जाम हुने गरेको सडक विभागको भनाई छ ।
विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम भन्छन्– ‘राति ११ बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म मात्र सडक मर्मतको काम गरेका छौं । त्योपनि आधा भाग अर्थात ४ मिटर सवारीसाधनलाई आउन जान दिने गरी ।’ ‘त्यसैले हाम्रो कारणले होइन, त्यहाँ चल्ने ठूला मालवाहक ट्रकहरूले गर्दा बाटो जाम भएको हो । ती उकालोमा छिटो कुद्न सक्दैनन्, जसले गर्दा पछाडिका गाडी पनि मारमा पर्छन् । अबको ३ दिनमा हाम्रो काम सकिन्छ।’
खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम लगभग सकिएको र अब पिच गर्न मात्र बाँकी रहेको गौतमले बताए । तर दशैँलाई लक्षित गरी ठूलो सङ्ख्यामा मालबाहक सवारी साधन काठमाण्डू भित्रिरहेका र काठमाण्डूबाट यात्रु बाहिरिने क्रम तीव्र बनिरहेका बेला सडक मर्मत गर्नाले जाम बढेको बताइन्छ।
काठमाण्डू भित्रिने प्रमुख नाकाको सडक खण्ड निर्माण छिटो गर्न सरकारले पर्याप्त चासो नदिएकैले आफूहरूले सास्ती भोग्नु परेको मंगलबार काठमाण्डूबाट नारायणगढ जाँदा जाममा परेकी लक्ष्मी अर्यालले बताइन्।
उनी भन्छिन्, ‘बिहानको ६ बजेदेखि नै जाममा परियो। हामी ६–७ घण्टा जाममा पर्‍यौँ । २–४ जना ठेकेदार लगाएर काम गरेको भए छिटो सकिन्थ्यो होला । शौचालयसमेत नभएको ठाउँमा जाम हुन्छ। तर, के गर्नु सरकारलाई हामीजस्तो साधारण मान्छेको मर्काको के चासो छ र ? ठूला–बडालाई यो सडकबाट यात्रा गर्न पर्दैँन ।’ ८ मिटर चौडा सडकको आधा भाग बन्द हुँदा स्वतः जाम हुने जानकारहरू बताउँछन्।
त्यस्तै, नागढुङ्गादेखि कलंकीसम्मको विस्तार गरिएको बाटो पनि मर्मत नहुँदा उक्त सडक खण्डमा समेत जाम हुने गरेको छ। बीबीसीबाट
ट्याग्स: kalanki-naagdhunga road